ငါးချဉ် လုပ်ရအောင် ~ စန္ဒကူး
ကျေးဇူး အစ်မ တခါ ပုဇွန် ချဉ် လုပ်သေးတယ် ကျက်တဲ့ထမင်း နဲ့ လုပ်ရတယ်ဆိုလို့တွယ်လိုက်တာ မှိုတက်သွားတယ် ခု မှဘဲ မကျက်သေးတဲ့ ဟာနဲ့ ဆိုတာသိရတယ် စမ်းကြည့် အုံးမယ်
အရင်တစ်ခါကူးလုပ်တာပုပ်သွားလို့... အခုမကျက်တဲ့ ထမင်းဘဲသုံးလိုက်တယ်
ကူးနည်းလေးနဲ့ လုပ်ကြည့်ဦးမယ်။ အပြင်ကဝယ်စားရင် ဖက်များနေတယ်။ ကူးကူးငါးချဉ်က ငါးကြီးချဉ်လိုမျိုးဖြစ်မယ်နဲ့တူတယ် ။ ကသာဘက်ကလိုမျိုး ။ စားလို့အရမ်းကောင်းတယ်
ကူးကူးရေ ... သေချာတော့မဖတ်ရသေးဘူး။ ရုံးမှာမှို့။ ငါးချဉ်သိပ်ကြိုက်ပါတယ်။ ပုံနဲ့သေချာကို ရှင်းပြထားတာဆိုတော့ လိုက်လုပ်ကြည့်ဦးမယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ ငါးချဉ်ကို ငါးသေးသေးလေးတွေနဲ့ပဲလုပ်တယ်နော်။ ဘာလို့လဲမသိဘူး။ အဲလိုငါးအကြီးနဲ့လုပ်တာ မမြင်ဖူးသေးဘူး။
ကူးးးးးးးကူးစ်
ကောင်း၏ ရုံလေးတော့ ငါချဉ်ကြိုက်၏
လုပ်လို့ ရ၏ ။တချို့ က လက်ကိုယ်က မချဉ်တတ်
ဟု ဘွားဘွားကဆို၏ :))))))
ဟုတ်တယ် မြန်မာမှာက ငါးကလေးချဉ်ရောရတယ်
ကချင်ပြည်နယ် နန်းမားဖက်က ငါးကလေးချဉ်က
ကောင်းမှကောင်း မုံညင်းဖူး ပေါင်းလေးနဲ့စားရတာ
ဒါပေမဲ့ ငါးကြီးချဉ်ရောရတတ်တယ် ပင်စိမ်းနဲ့ သုပ်စား
ဟီ ဟီ စတာနော်
မြူးစ် ကူးမှာမောင်လေးချောချောရှိတယ်သိလား..
ယောင်းမ ပြန်တော်မယ်.. ဟီးဟီးး
သုတ်စားလို့ကောင်းမလား မကူးကူး...
ဆီတွေ မကြည့်ချင်သေးလို့... ဘာလချောင်ကြော် ကြော် ပြီး ကထဲကပဲ..
ကောင်းမယ်ဆို ဗူးလိုက်မသွားမလို့.. ဟဲဟဲ
လိုက်လုပ်ကြည့်ချင်စိတ်ပေါက်သွားပြီ...ကြော်ထားတဲ့ပုံ လေး ကောင်းမှာသေချာတယ်
ကူးးးးးးးကူးစ်
ဟိ ဟီး ရုံလေး တော့ပွတော့မှာပဲနော်
ယောင်းမ ချက်ကျွေးတာလဲ စားရ
မောင်လေးရော ရ ဟဟ မိုက်တယ်ဗျို့ 
Any of you know about running around with dental problems and toothaches? I'm sure you do that's why trying to cover up tooth embarrassment with money. lol looking for date sites and cash because you need better teeth. anyway, i'm not selling anything or anything but i do want to encourage everyone to look up veneers. google it or find it somewher or ask your dentist. it is the freaking best thing the world.
Hung Shan said...
Hello...Ama..it looks so delicious. I also want to do. Could u please let me know how to say in English. Now i 'm in US and don't know what kind of fish i should buy for "Nga Chin"
hi.. any fish will do..
it's better if you use smaller one..
try "Trout" i hope you can buy there ..
Thanks alot ...i 'll find small trout.